Dzidza maitiro ekubatanidza maviri 2016 MacBook Pros kuburikidza neUSB-C yefaira kugovana | Ndinobva mac
Dzidza maitiro ekubatanidza maviri 2016 MacBook Pros kuburikidza neUSB-C yekugovana faira
Iye zvino vashandisi vatsva vava kusvika kune vamwe vashandisi 2016 MacBook Pro, ingave neTouch Bar kana isina Touch Bar, nhasi tinokuunzira chidzidzo chauchadzidza kubatanidza maviri eedu 2016 MacBook Pro kuburikidza neayo Thunderbolt 3 USB-C zviteshi.
Nenzira iyi, iwe unogona kuwana ruzivo rwese rwaunoda kubva kune imwe kana imwe kunze kwekutora ruzivo nemidziyo yekunze kana kuutumira kubva kune imwe komputa kuenda kune imwe uchishandisa AirDrop, izvo dzimwe nguva zvinononoka kana mafaera akakura.
Kana isu tichida kuwana iyo ruzivo irimo mune nyowani MacBook Pro kubva kune imwe nyowani MacBook Pro, ndiko kuti, kuvabatanidza kuburikidza neThunderbolt yavo 3 USB-C zviteshi, nhanho dzatinofanira kutevera ndedzinotevera:
Isu tinobatanidza ese ari maviri makomputa ine USB-C kune USB-C tambo.
Iye zvino tinofanirwa kuenda kuSystem Preferences> Networks uye mukoramu yekuruboshwe pazasi tinya pa "+", mushure meizvozvo tinobvunzwa nezverudzi rwekubatanidza rwatinoda uye isu tichafanirwa kusarudza Thunderbolt 3. Isu tinoita izvi pane ese maviri makomputa.
Nhanho inotevera ndeyokumirira ese ari maviri makomputa kuti azive kuti akabatana kune mumwe nemumwe uye nekuzvipira kupa iyo IP kero kune yega yega.
Isu tinoenderera mberi maitiro achipinda Sarudzo dzeSystem> Kugovana> Kugovana Faira uye tinoita izvi pamakomputa ese ari maviri kuitira kuti patinotsvaga netiweki yakagadzirwa, komputa inotibvumidza kuwana mafaira.
Iye zvino isu tinongofanirwa kutarisa kune network kero iyo iyo system yakapa kune imwe yemalaptop uye wozoenda kune imwe kuti upinde mairi Enda> Unganidza kune server iyo yatinowana mumenyu yepamusoro ye Finder.
Iye zvino hurongwa hwacho hunotibvunza isu zvekupinda humbowo kune imwe komputa uye isu tinokwanisa kuwana iyo Finder hwindo kwatinogona kuwana ese mafaera system.
Maitiro aya anotendera iwe kuti uite zvakafanana neAirDrop asi nekukurumidza zvakanyanya kunyanya nemafaira makuru.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » MacBook Pro » Dzidza maitiro ekubatanidza maviri 2016 MacBook Pros kuburikidza neUSB-C yekugovana faira
Chinja mafaera ePDF kuenda kune mamwe mafomati kubva kubhurawuza rako
HUB USB 3.0 - USB Type C yeMac kubva kuHooToo pahafu yemutengo